https://www.jvxingchemical.com/uploads/f195581d3ac1b837e3dbf21ed64b1b86.mp4 Nkọwa ngwaahịa CAS Nke: 122841-12-7 Aha ndị ọzọ: Cefoselis sulfate MF: C19H24N8O10S3 :dị: Enyemaka na ndị ọzọ ọgwụ Chemicals ọkwa ọkwa, osdị Mma, Nri Nri, Nrịgo Ọgwụ, Nji Ọgwụ E Ji Eme ihe: Animal Pharmaceuticals Ọcha: 99% Ọdịdị: White Powder CAS: 122841-12-7 Asambodo: COA ọkwa: Phamaceutical Grade Assay: 99% Min Sample: Availiable COA: Cai Cososelis dị na ya bụ ebe a na-ejikarị. nzọ ...
EDB bụ onye na - akwalite amine dị irè nke enwere ike iji ya na ndị na - ebido UV dị ka ITX na DETX maka ịgwọ UV nke ink, varnish na sistemụ mkpuchi na akwụkwọ, osisi, ọla na plastik.
Ihe a na-atụ aro maka EDB bụ 2.0-5.0%, na mgbakwunye mgbakwunye maka photoinitiators ejiri ya na ya bụ 0.25-2.0%.
Dichlormid nwere ike melite iguzogide ọka na ahịhịa thiocarbamate. Ọ bụ ihe nchekwa pụrụ iche iji gbochie ọka site na dimethyl na acetochlor na-emebi ọka.
Pyrazolopyroxypyr bụ ihe nchekwa ọhụrụ nke Brighton Plant Protection Association kwupụtara na 1999. Enwere ike iji ya na ụfọdụ ahịhịa ahịhịa iji kpuchido ihe ọkụkụ dịka ọka wit na ọka bali na nsogbu.
Deltamethrin (usoro ihe omimi C22H19Br2NO3, usoro 505.24 dị arọ) bụ kristal na-acha ọcha nke iwu nwere agbaze agba nke 101 ~ 102 Celsius C na isi mmiri 300 Celsius. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbanye na mmiri na ụlọ okpomọkụ ma na-agbaze n'ọtụtụ ihe ndị na-edozi ahụ. Dịtụ ike na ìhè na ikuku. Ọ bụ ihe siri ike na acidic ajụ, ma ejighị n'aka na alkaline ọkara.
Nhọrọ ogwu. Njikwa ahihia kwa afọ (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Brachiaria, Panicum, na Cyperus) na ụfọdụ ahịhịa buru ibu (Amaranthus, Capsella, Portulaca) na ọka, sorghum, okpete, soya agwa, obere ego, owu, shuga beet, fodder biiti, poteto, akwụkwọ nri dị iche iche, sunflowers, na pulse kụrụ.
LAMBDA CYHALTHRIN ACID bụ otu n’ime etiti dị mkpa nke ụmụ ahụhụ pyrethroid, nke enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma pyrethroids
A na-ejikarị ya eme ihe dị ka ihe nchebe nke ahịhịa ọgwụ dị ka alachlor, acetochlor, chloramphenicol na EPTC. A na-ejikarị ya eme ihe
nchekwa gị n'ụlọnga nke acetochlor na ndị ọzọ na amide ahịhịa igbochi na ịchịkwa isi. N'ozuzu, usoro onunu ogwu bu 3-5%. Ọ nwere ike ịbụ
kpụ ọkụ n'ọnụ na miscible na acetochlor.
Methylbentonitic acid bụ etiti dị mkpa nke pyrethroids, nke nwere ike ịmepụta diclofenac na triflurothrin iji mepụta pyrethroids dị ka permethrin, cypermethrin na cyhalothrin. Dịka ọmụmaatụ, usoro ọhụụ ọhụrụ nke pyrethroid-permethrin bụ ịgbakwunye 3,3- dimethyl-4,6 na methyl bentonitic acid dị ka akụrụngwa na ferrous chloride dị ka onye mbido na usoro Chemicalbook mechiri emechi.
Hydrazine hydrate dị ka ezigbo ihe ọkụkụ dị mkpa dị mkpa, nke a na-ejikarị eme ihe maka ụfụfụ ụfụfụ; na-eji dị ka esi mmiri ọkụ ihicha ọgwụgwọ gị n'ụlọnga; maka mmepụta nke ọgwụ mgbochi ọrịa ọgwụ, ọgwụ na-egbochi ọrịa shuga; maka ahihia eji eme ihe na ulo oru ogwu pesticide, ndi mmadu na ndi mmadu ndi mmadu na ndi ogwu,